Ireo mpanohana - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Ny momban’ny Lemur Conservation Network › Ireo mpanohana
Ny IUCN Commission (SSC) dia tambazotra iray izay mifantoka tanteraka momba ny siansa ary efa mihoatra ny 9.000 mahery ny isan’ ireo mpiasa an-tsitrapo manam-pahaizana avy any amin’ny firenena rehetra saika manerana izao tontolo izao. Ny ankamaroan’ny mpikambana dia mpikambana ihany koa amin’ny ireo vondrona manam-pahaizana sy manan-traikefa mihoatra ny 130 isa toy ny Red List Authorities and Task Forces.
Ny “Primate Specialist Group” dia tambazotra iraisam-pirenena izay hiombonan’ireo siantifika sy ireo mpiaro ny tontolo iainana. Anisan’ny hifantohan’ny asan’izy ireo ny fampirisihina ny fikarohana mikasika ny ekolojia sy ny fiarovana ireo « primates » izay misy karazany efa ho aman-jatony- tahaka ny rajako , « apes », ny gidro/varika na ihany koa ireo mitovy aminy fa saingy mivoaka amin’ny alina ihany.
Ny Bristol Zoological Society dia fikambanana iray navondron’ireto ivo-toerana manaraka ireto: Ny Bristol Zoo Gardens, ny fahim-bibidia mirefy 05 HA ao Bristol; ary ny tetik’asa misahana ny fiarovana ary departementa misahana ny siansa manodidina ny fiarovana ireo harena ara-voajanahary izay misahana ny fanangonana tahirin-kevitra siantifika; ary ny “Wild Place Project” – izay fahim-bibidia mirefy 55 Ha ao Cribbs Causeway, Gloucestershire.